नक्कली हिसिला यामी (बिपना बस्नेत)ले मनाइन् जन्मदिन, जान्नुस् कसरी बनेकी थिइन् नक्कली हिसिला
पुस, काठमाडौं । नक्कली हिसिला यामी बनेरै चर्चामा आएकी आर्टिस्ट बिपना बस्नेतले आफ्नो जन्मदिन मनाएकी छिन् । हाँस्य टेलिश्रृंखला तितोसत्यमा आर्टिस्ट ज्योती काफ्ले (नक्कली बाबुराम)को श्रीमती बनेर पर्दामा देखिएपछि उनको चर्चा चुलिएको थियो । मंगलबार राजधानीको सामाखुसी स्थित ‘थ्रि वे रेष्टुरेन्ट एण्ड बार’मा एक कार्यक्रम गर्दै उनले परिवार तथा केहि चलचित्रकर्मिहरुसँग आफ्नो जन्मदिन मनाएकी हुन् । धेरै ठुलो तरिकाले जन्मदिन सेलिब्रेसन गर्न मन नपराउने जनाएकी बिपनाको जन्मदिनका केहि कममात्रामा मात्र चलचित्रकर्मिहरुको उपस्थिती देखिन्थ्यो । बिपनाको जन्मदिनमा उनकी छोरी नायिका रिस्ता बस्नेत, चलचित्र निर्देशक समुन्द्र भट्ट, नायक सुरज आर.डी लगायतका केहि चलचित्रकर्मिहरुको उपस्थिती रहेको थियो । चलचित्र निर्देशक समुन्द्र भट्टले बिपनाको जन्मदिनमा सरप्राइज केक दिएकी थिइन् । आर्टिस्ट बिपनाले छोरी रिस्ता, निर्देशक समुन्द्र लगायत उपस्थित सबैलाई केक खुवाएकी थिइन् ।
बिपना बस्नेत कसरी बनिन् नक्कली हिसिला ? बि. सं २०५३ सालबाट हेयर ड्रेसर बनेर पर्दापछाडि बाट कलाकारीता सुरु गरेकी बिपना बस्नेतले निर्देशक प्रदिप रिमालका छोरा राजु रिमालले निर्माण गरेको भिडियो फिल्म ‘प्रश्चाताप’ मा पहिलो पटक अभिनय गर्ने मौका पाएकी थिइन् तर घरपरिवारको सपोर्ट नभएको र चलचित्रमा खेल्न अनुमति नदिएकाले उनले त्यो चलचित्र केहिदिनको छायांकन पछि छोडेकी थिइन् । - त्यो समयदेखी नै पर्दा पछाडिबाट कलाकारीतामा सक्रिए हुँदै आएकी उनलाई बि.स. २०६९ सालमा आर्टिस्ट दिपा श्री निरौलाले फोन गरेर हाँस्य टेलिश्रृंखला तितो सत्यमा नक्कली हिसिला यामी बन्नको लागी अफर गरेकी थिइन् । माघको अन्तिम तिर फोनबाट नक्कली हिसिला यामी बन्नका लागी आफुलाई अफर गरेको र फागुन १ गते पहिलो पटक तितोसत्यमा अभिनय गरेको उनी बताउँछिन् । -
नक्कली बाबुराम भट्टराईको अभिनयबाट चर्चामा आएका आर्टिस्ट ज्योती काफ्लेसँग उनले तितोसत्यमा अभिनय गरेदेखि उनको चर्चा चुलिएको थियो । तितोसत्यमा अभिनय गर्न लागेको पाँचबर्ष पुग्नलाग्दा तितोसत्य टेलिश्रृंखला बन्द भएतापनि उनको माग पछिल्लो समय बिभिन्न चलचित्र तथा स्टेज कार्यक्रमहरुमा हुने गरेको छ । आर्टिस्ट बिपनाले ‘रिफ्युजी’, ‘आधापेज’, ‘मसान’, ‘शुभकामना’ लगायतका दर्जन चलचित्रहरुमा अभिनय गरीसकेकी छिन् । साथै उनले आँफैले निर्माण गरेको हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको सौभाग्यवती नामक टेलिश्रृंखला पनि चर्चित थियो । जुन अहिले बन्द भइसकेको छ भने अहिले उनी हिमसिखर टेलिभिनमा नक्कली हिसिला यामी भएरै टक शो चलाउने गर्दछिन् । आर्टिस्ट बिपनाको परिवार नै कलाकारीता क्षेत्रमा सक्रिए छन् । उनकी छोरी नायिका रिस्ता बस्नेत र छोरा रिनेक्स बस्नेत पनि चलचित्र क्षेत्रमा चर्चा कमाइसकेका आर्टिस्ट बनिसकेका छन् ।